चुनावी प्रक्रिया र परिणाम बारे साहित्यकार गदाल | www.sidhakurausa.com
चुनावी प्रक्रिया र परिणाम बारे साहित्यकार गदाल
एनआरएन एनसीसी अफ युएसएको मतदान अहिले साझ सकियो । हुलाकबाट मतपत्र कार्यालय समयभित्र पठाउन दिइएको समय सिमा सकिए पछि अब सबैको ध्यान पर्सि बेलुका साँझसम्म कस्तो नतिजा आउने हो भन्नेतिर सोझिएको छ । अस्ति यतिखेर फोनको घन्टी एक पछि अर्को गरी बज्थ्यो तर आज दिनभर १० घन्टी भन्दा बढी बजेन । उम्मेदवारहरु, मिडिया, मतदाताहरु र समाजसेवीहरु सबै सुस्ताएका छन । यसैबीच अन्तरास्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पूर्ब केन्द्रीय अध्यक्ष तथा गीतकार ज्ञानेन्द्र गदालले कोलोराडोबाट घन्टी बजाए । यहि मौकामा वहासंग एनआरएन अमेरिकाको चुनावी प्रक्रिया र यसको सम्भावित नतिजा बारे कुराकानी गर्ने अवसर मिल्यो । केहि महिना अघिदेखि चर्चित ”झरी पछिको आकाश” गीतिसंग्रहका लेखक गदालसंगको छोटो कुराकानीको सार संक्षेप:
सिधाकुरा: एनआरएन अमेरिकाको चुनावी गतिविधिलाई कसरी निहाल्नु भयो?
गदाल: सबै कुराहरु राम्ररी सम्पन्न भए तर बिरोधका स्वरहरु र नेगेटिभ क्याम्पेन अलि बढी भयो की? समग्रमा चुनाव राम्ररी सम्पन्न भएको मान्नु पर्छ ।
सिधाकुरा: थाहै होला तीन जना प्रतिस्पर्धीहरु हुनुहुन्छ । अध्यक्ष पदमा कसले जित्नुहोला?
गदाल: अनुभवी र संस्थागत पूर्वाधार बनाउनु भएका शिवकुमार राई, कानूनी र बौद्धिक ज्ञान हुनु भएका खगेन्द्र जिसी र जुझारु अनि युवा उम्मेदवार बिष्णु देउराली सबैजना सक्षम व्यक्ति नै हुनुहुन्छ । कसले जित्ला भन्दा पनि सबै जना आ-आफ्ना ठाउमा सक्षम हुनु भएकाले यसै भन्न नसकिने स्थिति मैले देखेको छु ।
सिधाकुरा: चुनावी प्रक्रियाको आलोचना समाचोलना गर्नु पर्दा कसरि गर्नु हुन्छ?
गदाल: चुनाव अलि बढी रंगिन भयो । अमेरिकाको नेपाली समाजले त्यस्तो खोजेको थिएन । नेपाली समाजले नचाहदा नचाहदै पनि राजनीतिक रंग आउनु भोलिका दिनलाई झन बढी रंगिन बनाउने संकेत हो । यो पक्ष चाहि अत्यन्त नराम्रो भयो । राजनीतिले समाज भाड्ने मात्र हो ।
सिधाकुरा: नव निर्बाचित बोर्डबाट के अपेक्षा गर्नु भएको छ?
गदाल: सबैले आ-आफ्ना घोषणा पत्र लिएर चुनावमा आउनु भएकाले ति चुनावी घोषणा पत्र सिंगो समाजको सल्लाहा र सुझावमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा वहाहरुको हो । त्यसको अलावा सदस्यता ब्रिद्दि र सबै राज्यहरुमा एनआरएन अमेरिका पुग्नु पर्छ, त्यसमा लाग्न नतिजा प्रकाशित भएको भोलिपल्ट देखिनै बोर्डले कदम चालोस ।
साहित्यकार, गीतकार र समाजसेवी गदालका अभिव्यक्तितिर ध्यान दिंदै नव निर्बाचित बोर्डलाई जिम्मेवारीपूर्बक सोच्नु पर्ने तर्फ सिधाकुरा सोझ्याउन चाहन्छ ।
Thakur Chandra Gahatraj says: